Tartanka orodka ugu caansan uguna caansan aduunka | Fardaha Noti
Orodada ugu caansan adduunka
Faraska shaki la’aan wuxuu ka mid ahaa safiiradii ugu aaminka badnaa ee safarka aadanaha intii taariikhdiisa ahayd. Arrintaas oo kale ayay ahayd, in xayawaankani uu dhammaystiray qayb aad u firfircoon oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee nolosha aadanaha, illaa heer uu ka ciyaaro door aasaasi ah, xitaa cayaaraha.
Inta badan dadweynaha, tartanka fardaha wuxuu u noqday mid ka mid ah hiwaayadaha firaaqada ugu habboon. Xaqiiqdii, edbintaan isboorti waxaa loo yaqaan "Isboortiga boqorrada." Tani waa sababta, in orodku uu noqday mid ka mid ah kaabayaasha ugu muhiimsan adduunka.
Qodobkaan waxaan kugu soo bandhigeynaa qoob-ka-ciyaarka orodka ee fadhiya boosaska ugu sareeya qiimeynta. Dhismooyinka cajiibka ah ee siiya tartamada timaha dhalaal gaar ah.
3 Reer Argentine oo ka yimid Palermo
5 Ciudad Jardin
Tartan orodkan ayaa ah midka ugu raaxada badan uguna xiisaha badan dhamaan. In ka badan xero loogu talagalay dabaaldega tartamada faraska, waxay noqotay magaalo dhab ah. Ayaa ku yaalay Dubai, Imaaraadka Carabta.
Wax kharash ah looma reebin dhismihiisa. Inbadan $ 1200 bilyan ayaa maalgashiga loo baahnaa.
Wadadiisu waxay leedahay dherer ah 2,4 kiiloomitir, kan ugu weyn meeraha. Taageerayaasha doonaya inay ka fekeraan jinsiyadaha halkaas ka dhacaya, waxay ka awoodaan inay sidaas ka sameeyaan tarabuunka dhererkiisa, oo leh in ka badan 55.000 kursi
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale leedahay suurtogalnimada inaad ku degto hudheelkeeda cajiibka ah, oo leh illaa wadar ahaan 290 qol oo loo qalabeeyay kootooyin aan la qiyaasi karin. Waxay kaloo wacdaa, iyo inbadan, ujeedka madxafkeeda, maqaayadaha caanka ah, tiyaatarka, iwm.
Jaleecada hore, waxay umuuqataa in orodka fardaha uu yahay waxa ugu yar ee tartankan.
Waa in la sheegaa in dhexdeeda aysan jirin meel loogu talagalay khamaarka, maadaama diinta muslimka ay si adag u mamnuucayso iyaga.
Tartanka runta ah ee boqortooyada, oo waligiis sifiican looma sheegin. Waxay ku taal magaalada Ascot, oo aad ugu dhow qasriga Windsor. Waxay si dhow uguxirantahay Boqortooyada Ingiriiska, dhab ahaantii waa hantidooda.
Iftiinka markii ugu horreysay ayuu ku arkay gudaha 1711, oo ay gacanta ku hayso boqoradda Anne, waana ku mahadsan tahay daabacaaddii koowaad ee Ascot Gold Cup, mid ka mid ah tartamada ugu magaca dheer waxaa laga dhex helayaa wareegga tartanka fardaha xirfadleyda ah.
Saldhigyadeeda waxaa ku badan, inta badan, dadka ka tirsan jagooyinka sare ee bulshada iyo dadka haybadda leh. Xaqiiqdii, Elizabeth II lafteeda waa daawade aamin ah.
Reer Argentine oo ka yimid Palermo
Waxay leedahay sharaf weyn oo ah inay noqoto tartankii ugu horreeyay ee la dhiso dhulka magaalada Buenos Aires. Shaki kuma jiro in maanta ay tahay mid ka mid ah astaamaha ugu caansan waddanka Argentina.
Daahfurkeedii wuxuu dhacay dhammaadkii qarnigii XNUMX, si gaar ah sanadka 1876, inta udhaxeysa Febraayo 3 Park iyo Alfalfares de Rosas. Sagaal xilli kadib, wuxuu markhaati ka noqday mid kamid ah xigashooyinka dhifka ah ee abid lagu arko adduunkan tartanka fardaha: Abaalmarinta Qaranka ee caadiga ah, kaas oo ilaa 2500 oo mitir lagu daboolay oo marti sharaftiisu uu ahaa Madaxweyne Julio Roca.
Marka ay timaado ka hadalka fardaha Spain, waxaa jira halyeeyo ka cad cad: hipódromo de Zarzuela. Waxay ku xanniban tahay eisagu Monte de la Zarzuela, wuxuu ku xigaa magaalada Madrid ee El Pardo.
La wareegidii hore Tartanka Castellana Waxay ahayd kicinta La Zarzuela inay bilawdo in la dhiso sanadka gudihiisa 1931. Quruxdiisa dabeecad ahaanta looma oga. Xaqiiqdii, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah shaqooyinka waaweyn ee Jamhuuriyadda, iyo sanadkii 2009 waxaa lagu dhawaaqay Hantida Xiisaha Dhaqanka.
Hawlaha dhexdeeda ah mid aan kala go 'lahayn, marka laga reebo muddadii u dhaxaysay 1996 iyo 2005. Dhammaan caddaymaha ay hayso, kuwa soo socdaa waxay muujinayaan: Grand Prix ee 'Valderas Grand Prix', Cimera Grand Prix. Abaalmarinta Grand Beamonte ama Abaalmarinta Weyn ee Villapadierna (waxaa loo tixgeliyey kulanka Isbaanishka weyn).
Sannadba sanadka ka dambeeya, orodkan orodka ah, oo ka mid ah kuwa ugu da'da yar, ayaa fuulayay tallaabooyin si uu isugu muujiyo meesha ugu sareysa xagga qiimaha iyo muhiimadda tartannadiisa. Xilligan, taageerayaasha badankood waxay la mid yihiin, ama isla markiiba ka hooseeyaan, Ingiriisi Ascot.
Waxaa la abuuray 1941, waxaana maamula Naadiga Jockey ee San Pablo. Waxay leedahay wadar ahaan afar waddo, laba loogu talagalay dabaal-degga jinsiyadaha rasmiga ah, mid wuxuu ka samaysan yahay caws, kan kalena wuxuu leeyahay laambo ciid ah.
Sida dhammaan asxaabteeda horey loo soo sheegay, tartankan tartanka sidoo kale wuxuu noqday wax walba astaan ​​u ah magaaladiisa, São Paulo, iyo waddankiisa, Brazil.
Marka la soo koobo, kuwani waa kuwa ugu muhiimsan orodka adduunka. Si kastaba ha noqotee, magacyadan waxaan ku dari karnay kuwa kale sida Tartanka Tokyo (Tokyuo, Japan) ama bunni (Montevideo, Uruguay).
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Anshaxa » Tartanka fardaha » Orodada ugu caansan adduunka